Kenya: Qaxootigu waa inay tagaan Dhadhaab - BBC Somali - Warar
Kenya: Qaxootigu waa inay tagaan Dhadhaab
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 18 December, 2012, 11:30 GMT 14:30 SGA
Xeryaha Dhadhaab ayaa lagu tilmaamay kuwo buux dhaafay oo go'doon ah
Dowladda Kenya ayaa ku amartay tobanaan kun oo qaxooti ah oo ku nool magaalooyinka inay dib ugu laabtaan xeryaha qaxootiga.
Dowladdu waxay sheegtay in dhammaan dadka Soomaalida ah ee magangalyo doonka ah iyo qaxootiga ay iska xaadiriyaan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ee u dhaw soohdinta Soomaaliya.
Dadka ka yimid dalalka kale ayaa iyaguna anar lagu bixiyay inay iska xaadiriyaan xeryaha qaxootiga ee Kakuma oo ku yal Waqooyiga galbeed ee Kenya.
Weriyayaasha ayaa sheegaya in xeryahan ay yihiin kuwo buux dhaafay oo go'doon ah.
Tallaabadan ayaa waxa ay ka dambeysay weerarro is xigay oo ka dhacay xaafadda Eastleigh ee magaalada Nairobi, iyo weliba qeybo kale oo ka mid ah waqooyiga bari ee dalka, kuwaasi oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyaan kooxda Islaamiga ee al-Shabaab.